U-Apple, osolwa ngokuhlukumeza ngokocansi ekhempasini yakhe, uphendula ukugxekwa | Ngivela kwa-mac
Kubukeka kumbozwe ukwethulwa kwe-iPhone 7 ngesonto eledlule, izindatshana ezahlukahlukene zinanile ngo-a "Indawo enobuthi kakhulu" ekomkhulu le-Apple eCupertino, ECalifornia. Izingxoxo ezahlukahlukene phakathi kwabasebenzi ngokuqukethwe okusolwa ngokobulili kudaluliwe.
Lokhu kuziphatha okungafanele kuphenywa yi-Apple futhi, bayakuqinisekisa, kuzothathwa izinyathelo uma lokhu kuliqiniso. Ukuthola kabusha ukuqoqa ku-athikili a ingxoxo nenhloko ye-HR yenkampani, uDenise Young Smith ukuxoxa ngalezi zinhlobo zezinkinga.
Kule ngxoxo, siyabona ukuthi izinto ezifana ukuhlukunyezwa noma amanye amahlaya angafanele sekuyinto ejwayelekile usuku nosuku kuma-imeyili nezingxoxo phakathi kwabasebenzi (ikakhulukazi amadoda) ekomkhulu le-Apple.
Ngisho noTim Cook muva nje bekufanele akwenze thumela i-imeyili yenkampani lapho ayebekwe khona ngokungahambisani nanoma yisiphi isenzo esibuhlungu noma omunye umlingani:
"Amahlaya okudlwengula engxoxweni yomsebenzi empeleni lapho ngidweba khona umugqa ngokuphelele"UCook wabhala nge-imeyili; "Angizizwa ngiphephile enkampanini ebekezelela abantu abenza amahlaya okudlwengula."
Kulesi sihloko esifanayo, kugqanyiswa amacala ahlukene ocansi enkampanini, lapho kukhona nokuvuma izono komunye wabasebenzi benkampani, lapho uqinisekisile ukuthi uyasebenza "Indawo yokusebenza enobudlova nesimo".
Engxoxweni, uYoung uchaze ukuthi inkampani iwathatha ngokungathi sína lawa macala, futhi uqobo. Ngaphezu kwalokho, uthi uthathe "izinyathelo ezihambisana nobucayi bendaba", kepha ukhetha ukungayingeni imininingwane.
"Kuthathwe izinyathelo ezilinganisekayo"U-Young Smith uthe, ukuqaphela ukuthi izinyathelo zokuqondiswa kwezigwegwe ezithathiwe zingaqala ezingxoxweni ezingajwayelekile ziye esiphethweni esinamandla, okuholele ekuxoshweni. Wenqabile ukusho ukuthi kwenziwa ini kulezi zimo ezithile, ecaphuna ukukhathazeka kwangasese.
UTim Cook, yize ungaphenduli ngqo kuwo wonke ama-imeyili atholiwe, ibuye yazibeka yazungeza lezi zinsolo. Ngokusho kukaYoung uqobo:
"Phakathi kwakho konke lokhu, ubekhona, nathi sonke, ukuqonda okwenzekile nokuthi yini esingayifunda"Kusho u-Young Smith.
Inhloko yenkampani yezabasebenzi usebenza ku-imeyili yokugcina lokho kuzothunyelwa kungekudala kubo bonke abasebenzi nabezindaba abazenanele lezi zindaba, ukubhekana nezinsolo ezifanele.
Indlela ephelele ye-athikili: Ngivela kwa-mac » Apple » Izaziso » U-Apple, osolwa ngokucwasa ngokobulili ekhampasi yakhe, uphendula ukugxekwa